DAAWO VIDEO: Nuxurka Khudbadii Axmed Madoobe & arrimo xasaasi oo uu ka hadlay – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland, Axmed Madoobe oo maanta khudbad ka jeediyay kulan uu la yeeshay guddiga joogtada ee Golaha Aqalka sare ayaa waxaa uu ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka, sida doorashooyinka, khilaafka kala dhaxeeya DFS iyo Arrimaha Gobolka Gedo.
Aaxmed Madoobe ayaa isaga oo ka hadlay Arrimaha khilaafka waxaa uu sheegay in looga baahan yahay Dowladda inay sharciga ilaaliso waxa uu siinaayo ay qaadato, waxa iyaga siinayaana ay siiso.
Wuxuu intaasi raaciyay, in aysan jirin siyaasad ay isugu imaanayeen dowladda iyo dowlad gobaleedyada, si talada dalka wax layska waydiiyo.
Madaxweynaha Jubbaland, ayaa soo hadal qaaday Shirkii Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb, isagoona sheegay in shirkaasi la soo xiray markii la ogaaday in isaga iyo Madaxweynaha Puntland ay tagayaan.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka Khudbadda Axmed Madoobe:
Tags: arrimo xasaasi, Nuxurka Khubadda Axmed Madoobe
US lauds inclusion of state leaders in Mogadishu talks